धैर्य गरौं, अझै के-के देख्न बाँकी छ! - समय-समाचार
समय-समाचार सोमबार, २०७७ जेठ ५ गते, ०१:५६ मा प्रकाशित
लेखक अमित ढकाल
मेरी छोरी सेन्मीनूरलाई अस्ति बिहान उनकी आमाले सोधिन्, ‘तिमीलाई घरै बसेर पढ्न मन लागेको छ, कि स्कुल जान?’
उसले भनी, ‘मलाई त स्कुलै जान मनपरिसक्यो।’
सेन्मीनूर सामान्यतया घरै बस्न रूचाउने बच्चा हो। लकडाउन सुरू हुँदा घर बस्न पाएपछि ऊ फुरुंगै थिई। आजकल भने उसले स्कुल ‘मिस’ गर्न थालेकी छे। साथीहरू मिस गर्न थालेकी छे। साथीहरूसँग फोनमा कुरा गर्न पाउँदा दंग पर्छे। उसको अनुहारको चमकै फेरिन्छ।
केही दिनअघि मात्र अमेरिका बस्ने मेरा एक जना साथीले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखे, ‘कोरोना सकिएपछि छुट्टी लिएर सात दिन अफिसमा बस्छु।’
जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, केही दिनअघि डाक्टर भगवान कोइरालाले मलाई भनेका थिए, ‘कोरोनाको खेल भर्खर सुरू भयो। हामीले धेरै देख्न बाँकी छ।’
पहिलो, पछिल्लो एक साताले हामीलाई एउटा कुरा प्रस्ट भयो- परीक्षण कम भएर हामीले संक्रमित संख्या थाहा नपाएका रहेछौं। परीक्षण बढेसँगै संक्रमित बढेका छन्। आरडिटी र पिसिआर दुवैबाट परीक्षण संख्या अझै बढाउने राज्यको तयारी छ। पछिल्लोपटक चीनबाट आएको ‘आरडिटी किट’ पहिलेभन्दा राम्रो छ। यी दुवै विधिका परीक्षणबाट थप संक्रमित पत्ता लाग्नेछन्।
संसारभर कोरोनाका ८० प्रतिशत संक्रमित आफैं ठिक हुने गरेका छन्। संक्रमण भएपछि त्योसँग लड्न शरीरले ‘एन्टीबडी’ बनाउँछ। ‘एन्टीबडी’ ले भाइरससँग लडेर जित्यो भने मानिस फेरि स्वस्थ हुन्छ।
नेपालले सुरू सुरूमा ल्याएको ‘आरडिटी किट’ ले शरीरमा कस्तो खालको ‘एन्टीबडी’ बनेको छ, थाहा पाउँदैन थियो। यसपालिको किटले त्यो यकिन गर्नेछ।
फर्किएर हेर्दा हामीले एउटा गल्ती गर्‍यौं— भारतसँगको सीमा ‘सिल’ गरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो।
हामीले के बुझेनौं भने, सीमा ‘सिल’ गर्न सम्भव छैन। १८ सय किलोमिटर लामो सीमामा डेढदेखि तीन किलोमिटर दुरीमा सशस्त्र प्रहरीले ‘सेन्ट्री’ राख्यो। तर, मानिसहरू रात-बिहान गरेर ‘सेन्ट्री’ छलेर नेपाल छिरे। कतिपय ठाउँमा मानिसलाई सीमापारिबाट वारि ल्याइदिने समूह नै सक्रिय भए।
तेस्रो, भारतमा लाखौं नेपाली अहिले पनि ‘लकडाउन’ का कारण थुनिएर बसेका छन्। त्यसरी थुनिएकाहरू घर आउन चाहन्छन्। भारतमा अहिले रेल सेवा सुरू भएको छ। हाम्रा सीमा-नाकासम्म रेल आएको छैन। रेलमा ठूला सहरमा आएका मानिसलाई स-साना बजार र गाउँसम्म पुर्याइदिन भारतका राज्य सरकारले बस व्यवस्था गर्न थालेका छन्।
त्यसो भए कहिलेसम्म संक्रमण बढ्छ भन्ने डर पालेर बस्ने? कहिलेसम्म लकडाउन तन्काएर मुलुकलाई ‘बन्दी’ बनाउने? अर्थतन्त्रले यो कहिलेसम्म धान्न सक्छ? दैनिक रोजगारी गरेर गुजारा गर्ने र न्यून आय भएकाको जीवन कसरी चल्छ? लकडाउन गरेर हामीलाई के फाइदा भयो, आखिर संक्रमण त बढेको बढ्यै छ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने डा. रोशन खडकाको भनाइ महत्वपूर्ण छ। उनले हामीसँग भने, ‘महामारीसँग पहिलो मोर्चामा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको अहिले जति आत्मबल बढेको छ, त्यो लकडाउनका कारण हामीले तयारी गर्न पाएर, विस्तारै स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध भएर हो।’
अमेरिकामा कतिपय मानिस लकडाउनविरूद्ध बन्दुक बोकेर प्रदर्शनमा ओर्लिए। कतिपय पसल बन्दुक बोकेका ‘गार्ड’ राखेर खुलेका छन्। तर नयाँ सर्वेक्षणअनुसार बहुसंख्यक अमेरिकी जनता अहिले नै बाहिर निस्कन डराएका छन्। किनमेल र घुमफिर गर्न डराएका छन्।
अमेरिकाको ‘वासिङ्टन पोस्ट’ अखबारले विभिन्न देश र सहरले भोगेका लकडाउनसम्बन्धी दुबिधा समेटेर गत साता एउटा स्टोरी गरेको थियो। सेतोपाटीले भावानुवाद गरेर छापेको उक्त स्टोरीले लकडाउन जटिलताका पाटाबारे बोल्छ।
आजका दिनसम्म पनि यी प्रश्नको उत्तर कसैलाई थाहा छैन। सरकारसँग पनि कुनै योजना छैन। त्यसो भए, हामीले सरकारको ‘आदेश’ किने मान्ने? लकडाउन कहिलेसम्म पालना गर्ने?
गत साता सम्पादकहरूसँगको छलफलमा डा. अर्जुन कार्कीले भने, ‘लकडाउन र अन्य उपाय अपनाएर हामीले क्षति सीमित गर्ने र कोरोनाविरूद्ध खोप विकास नहुन्जेल पर्खने हो। संसारका धेरै वैज्ञानिक र डाक्टरले पनि यही भनिरहेका छन्।’
गत शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०२० अन्त्यसम्म खोप विकास गर्ने उद्देश्यले ‘अपरेसन र्‍याप स्पिड’ घोषणा गरेका छन्। उनले उक्त परियोजना घोषणा गर्दै भने, ‘यो ठूलो परियोजना हो र यसले चाँडो काम गर्नेछ। यो वर्ष अन्त्य वा त्यसअगावै खोप विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।’
ट्रम्पले यो परियोजनालाई परमाणु बम बनाउन अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्ध बेला सुरू गरेको ‘म्यानह्याटन प्रोजेक्ट’ सँग तुलना गरेका छन्। म्यानह्याटन प्रोजेक्टमा एक लाख बढी मानिसले काम गरेको अनुमान गरिन्छ। उक्त परियोजनाबाट अमेरिकाले परमाणु बम मात्र बनाएन, सन् १९४५ अगस्टमा जापानमा बम पनि खसाल्यो। त्यसपछि जापानले अमेरिकासमक्ष आत्मसमर्पण गरेको थियो।
चीनको खोप परियोजना कहाँ पुगेको छ, यकिन छैन। धेरै काम चीनले गोप्य रूपमै गरिरहेको छ। हङकङबाट प्रकाशित हुने ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ ले यसबारे केही समयअघि रिपोर्ट लेख्दै भनेको थियो, ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सेप्टेम्बर महिनासम्म र आममानिसका लागि डिसेम्बर वा जनवरीसम्म यो खोप उत्पादन हुने सम्भावना छ।’
समयसँगै र यात्रा गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्दा भाइरस ‘म्युटेट’ अर्थात् आफैं परिवर्तन हुँदै जानसक्छ। यसको क्षति गर्ने क्षमता पनि परिवर्तन हुन सक्छ। नेपालमा पनि अहिलेसम्म एकदमै थोरै क्षति भएको, बिरामीलाई उल्लेखनीय लक्षण नदेखिएको र अस्पताल भर्नासम्म गर्नु नपरेकाले यहाँ आएको भाइरस कमजोर हो? वा, हामी नेपालीको प्रतिरोध क्षमता अरूको भन्दा धेरै भएकाले हामीलाई यसले अहिलेसम्म गाँज्न नसकेको हो?
पछिल्लोपटक गरिएका अध्ययनले भने भारतमा आएको भाइरस ‘कमजोर’ भन्ने कुनै प्रमाण नभेटिएको जनाएका छन्। कोभिड-१९ भाइरसको अध्ययन गरिरहेको अग्रणी संस्था हैदरावादस्थित ‘सेन्टर फर सेलुलर र मलिकुलर बायोलोजी’ का निर्देशक राकेश मिश्रले भारतमा आएको भाइरस कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने प्रमाण अहिलेसम्म नभेटिएको बताएका छन्। थप संक्रमितको अध्ययन गर्नुपर्ने उनले सुझाएका छन्।
मानौं, संक्रमित पाँच वा दस हजार पुगे। त्यो बेला पनि नेपालीहरू अहिलेजस्तै गम्भीर बिरामी परेनन् वा मानवीय क्षति बढेन भने हामी एक खाले निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछौं। तर, अहिले नै हामीले पनि नेपाल छिरेको भाइरस कमजोर छ वा नेपालीको ‘इम्युनिटी’ (प्रतिरोधी क्षमता) धेरै छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु घातक हुनसक्छ।
बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिष्ट’ मा लेख्दै माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सले न्यूयोर्क, म्यानह्याटनको एउटा अस्पतालमा अधिकांश अफ्रिकी मुलुकका अस्पतालभन्दा धेरै आइसियु रहेको जनाएका छन्। त्यति क्षमता हुँदाहुँदै न्यूयोर्क संसारमै कोरोनाका कारण धेरै मान्छे मर्ने सहर बनेको छ। गरिब मुलुकमा संक्रमण फैलियो भने दसौं लाख मर्नसक्ने गेट्स अनुमान गर्छन्।
हामी निश्चिन्त भए हुन्छ— भाइसरसँगको यो ‘फाइट’ लामो छ। अझै धेरै देख्न बाँकी छ!
(साभार: सेतो पाटी)
लेखक: अमित ढकाल